Ho henjana hatrany ny fitokonana samihafa any Frantsa, raha tsy mihemotra amin’ny fanapahan-keviny ny fanjakana frantsay amin’ilay lalàna momba ny asa. Tena ahitana fitokonana ny sehatry ny fitaterana, SNCF, RATP, hatramin’ny fitaterana an’habakabaka. Inona ny fanapahan-kevitra horaisin’ny filoha François Hollande, 10 andro mialoha ny fanombohan’ny “Euro 2016” sy iray taona mialoha ny fifidianana ? Sahirana mafy ny fitondram-panjakana frantsay amin’izao fotoana izao, noho ity fitokonana tsy misy farany ataon’ireo sehatra maro samihafa ity, nefa toa tsy hihemotra amin’io lalàna momba ny asa io, hono, ny governemanta.
Singapour, tsy mitsahatra maka ny toerany eo amin’ny toekarena maneran-tany. Io tanàna io izao no fahatelo eo amin’ny fandraharahana ara-bola. Miroborobo ny fivoaran’ny tanàna, fandrosoan’ny teknolojia ary mbola any aminy koa izao ny fialokalofan’ireo tsy te handoa hetra (paradis fiscal) ka mampantanjaka azy eo amin’izay lafiny vola izay. Singapour ihany koa no voafaritra ho manana seranan-tsambo lehibe faharoa maneran-tany, sy ahitana toby fanadiovan-tsolika lehibe fahatelo.
Hita any Dubaï koa izao ny fivoaran’ny teknolojia samihafa. Tanàn-dehibe iray any Moyen-Orient i Dubaï, any Emirats Arabo. Firoboroboan’ny fandrosoana, indrindra eo amin’ny fifandraisan-davitra. Ahitana fanamboarana mitohy hatrany koa ny ao an-tanàna izay efa misy ireo trano avo misy rihana mijoalajoala. Saika orinasa lehibe avy any amin’ny firenena eoropeanina daholo ny mahazo ireo tsenam-barotra, miampy ny avy any Japana. Manana ny toerany lehibe eo amin’ny fitaterana an’habakabaka ny Fly Emirates, manana fiaramanidina maro sy lehibe indrindra, Airbus A380 miisa 75.